Imiphumela Yamakhasimende njengokuqukethwe: UDan Anton Walikhulisa Kanjani Ibhizinisi Lakhe le-SEO kumanani we-7 Leveraging Testimonials | Martech Zone
Imiphumela Yamakhasimende njengokuqukethwe: UDan Anton Walikhulisa Kanjani Ibhizinisi Lakhe le-SEO kumanani we-7 Leveraging Testimonials
NgoLwesine, Juni 9, 2016 NgoLwesihlanu, ngoJuni 10, i-2016 Douglas Karr
Ukumaketha kokuqukethwe kusetshenziswe ngokweqile, ngaphansi kokuhlaziywa, ibinzana le-buzzword ye-KPI ekumaketheni efinyelele esiphethweni sayo esinengqondo, abanikazi bamabhizinisi babhloga ngezihloko ezingathandeki ukuze ukuxhuma noma ukugcina iwebhusayithi yabo fresh.
Okuqukethwe Akuyona Indlela Yokuqeda
Eminyakeni edlule i-Google yathanda ukubeka amawebhusayithi amakhulu ezinokuqukethwe okuningi Lokhu kuholela kuma-blogger, abaxhumana nabo, kanye nabanikazi bamabhizinisi ukukhipha okuqukethwe okungatheni kokuqukethwe kwe-nauseam, ngesithembiso esilindelekile sokubuya kwe-Google okuzayo, ithrafikhi.
Manje, i-algorithm ithanda isipiliyoni somsebenzisi njengobufakazi ngokwanda kwe- Ama-SERP athonywe kakhulu ukuzibandakanya komsebenzisi njenge-CTR (chofoza ngokusebenzisa isilinganiso), iBounce Rate (uma othile eshiya iwebhusayithi yakho khona manjalo), kanye nesikhathi sokuhlala (isikhathi esimaphakathi kusayithi / ekhasini). Lokhu kugudluza kudale ukuhlukumezeka nokudideka phakathi kwamapulazi wokuqukethwe nama-blogger e-zombie azizwa enokwaneliseka okungaphezulu kuyimpendulo yokuxazulula ukumaketha kwabo okungenayo kanye nosizi lwethrafikhi, njengoba behla kabili emgunyeni wezindleko ezibunjiwe ekwakheni okuqukethwe okuningi, isenzo wobuhlanya nobuze.
Xoxa Indaba Engancanci: Okuqukethwe Kokuguqulwa
Umkhulu angakhuluma indaba efanayo ngomlilo wekamu ngoba isikhathi sakhe kanye nokulethwa kwakhe kuphelele. Indaba emnandi iyalela ukunakwa kwezethameli futhi ikhuluma ngqo ngentshisekelo yabo, okuyindlela esobala, kepha engasetshenziswa kangako; yini ekulo mlaleli? Okuthunyelwe okuyisisekelo kwebhulogi noma isiqeshana sokuqukethwe mayelana neresiphi yakudala ngeke kuveze okuthe xaxa ekuthengisweni kombhaki, njengoba neposi elinomoya omude kumthetho we-accounting lingeke liwine noma yimaphi amaklayenti ezinkampani.
Imininingwane, noma imfundo njengokumaketha kokuqukethwe kuyindlela engafanele. Eqinisweni, sisemininingwane egcwele ngokweqile, nge Amamayela angama-339 agcwele ama-iPads awakwazanga ngisho nokubamba iwebhu ebanzi emhlabeni wonke ngo-2010, futhi inani ledatha liyanda kakhulu ngonyaka ngamunye. Izinombolo zikhombisa ukuthi kungani amaqhinga aphelelwe yisikhathi wokuzama ukufundisa noma ukwazisa umphakathi ukuthengisa ngokuzibulala. Indlela engcono ukukhuluma ne-a Ubuhlungu bethemba kanye nokufakazela ukuthi ungamsiza ukuyixazulula, noma okungenani unciphise inkinga yabo.
Ababambisene, Amanxusa Omkhiqizo, kanye Nolwazi Lwamakhasimende
Nini UDan Anton uqale ngokukhangisa online waqonda imigomo ye- Og Mandino, ukuze uphindaphinde inani lomuntu kumele uphindaphinde imizamo yakho, futhi iyiphi indlela engcono ukwedlula yokuba nabanye bathuthukise izimpahla zakho noma izinsizakalo? Awaziwa njengabasebenzisana noma amanxusa omkhiqizo, lawa makhasimende athembekile ngoba uxazulule inkinga yawo, futhi weqa okulindelwe. Vele, iningi lizofuna ukunxeshezelwa ngokwezezimali ngokwazisa kwalo imikhiqizo noma izinsizakalo zakho yingakho amapulatifomu afana ne-JVzoo, Clickbank, Amazon, namanye akhona ukunikeza isikhuthazo sezezimali kulabo abafuna ukukhuthaza okuhle noma insizakalo.
Ukuze wenze abanye bathuthukise umkhiqizo wakho udinga a) ukusebenza b) ube nemikhawulo yenzuzo yokuxhasa amandla "okuthengisa". Abathengisi be-Intanethi baqala ukuzenzela ezabo izifundo, bekhombisa ukuthi imikhiqizo eyahlukahlukene ye-SaaS (isoftware njengenkonzo) ixazulula kanjani inkinga yabo - ukumaketha okuku-inthanethi ngokuyinhloko. Manje, esikhundleni sesifundo sokuqala samacala esenziwe nguDan nethimba lakhe, bekungamakhulu abanye bekhuluma, bexoxa futhi bekhangisa ngalo mkhiqizo. Noma uDan ethathe isinqumo sokwakha ama-blog ayi-10,000 mayelana nokwenziwa kwe-online traffic, bekungeke kufinyelele kuma-signups wamakhasimende omhlaba wangempela nokuthengisa kusuka ekwenziweni komkhiqizo oqinile, kanye nokuqhamuka kwezifundo zamacala kusuka kochwepheshe abathembekile, bezentengiso be-intanethi.
Kusukela manje kunemiphumela engaphezu kwengu-15,300 ku-Google ye-BacklinksIndexer Review, nangaphezulu kwe-4,500,000 yeCrowd Search Me Review. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi ucwaningo lwamacala lwakuqala lwaluyisikhuthazo, esinika umfutho kwabanye ababhala ngezifundo zabo zamacala, kwalandelwa ubufakazi ezinkundleni ezidumile ezifana neWarriorForum, iBlackhatWorld, nabantu abanjengoTerry Kyle noJon Leger. Isibonelo sevidiyo nesikrini ngezansi:
Inhlebo, i-Hype namathuba wokuqukethwe wesikhathi esizayo
Akekho umuntu ofuna ukuxoxa ngento ebonakala indala, iyisicefe, noma ingenamsebenzi. Abantu banjalo bakhangwa abawinile nezimo zokuwina. Isigaba sokuqala sokuguqula umkhiqizo kaDan kusuka kumkhiqizo ojwayelekile we-inthanethi kwakuwukuxoxa izindaba kwamakhasimende ngendlela yezifundo ezimayelana namacala, noma ifomu elibuthakathaka kakhulu, ubufakazi, obanikeza izinhlangano eziphethwe kanye nabanye ukuzikhuthaza. Isigaba sesibili siqoqa umfutho owenele wokuzuza kulo msindo. Inzalo nomfutho kubalulekile ekufinyeleleni kubantu abaningi, njengoba kubonwe yi Umphumela we-Shark Tank, lapho abancintisanayo bebona ukuphakama okukhulu ekuthengiseni nakwenye inzalo yabatshalizimali ngokuhlanganiswa nje nombukiso we-TV.
Eyaziwa nangokuthi i-PR, noma i-Public Relations, kuhlale kulula ukuthola abezindaba, uma unabezindaba, okuyi-catchy engaqondakali 22. Imiphakathi ephezulu kanye nochwepheshe abanjengoSemantic Mastery, Mike From Maine, noCarl Radley bonke bacele izingxoxo noDan ukuze xoxa ngemikhiqizo yakhe yokuphakama kokudingeka, enza izibalo ezingaphezu kwezingu-7 minyaka yonke.
Isicelo Sangempela Somhlaba Sokuphinda Impumelelo ka-Dan Anton's SEO
Akuwona wonke amabhizinisi anokunethezeka kokusebenzisana noma amanxusa emikhiqizo. Uma uthengisa amakhukhi, ukwenza mhlophe kwamazinyo noma izinsizakalo zommeli kungenzeka ukuthi unayo imali yokudlulisela kahle, noma umane usesiqhingini esiphikisana nomncintiswano. Imigomo yokuthi uDan ukwazile ukukala ngokushesha ingasetshenziswa kunoma iyiphi imodeli yebhizinisi, noma kugcizelelwa kakhulu ekubuyekezweni kwamakhasimende, nasezifundweni eziyizibonelo.
Izwi lomlomo lisetshenzisiwe ngezibuyekezo zedijithali, okuvumela amagama nekhasimende ukuthi liqhubeke nokuphila futhi libe nomthelela kwabanye unomphela. Akwanele nje ukuba nokubuyekezwa, njengoba kungenzeka ukuthi umncintiswano unazo; kufanele uxoxe indaba ngocwaningo oluyimpoqo. Hlangana noBob, wayenamazinyo aphuzi futhi akazange aphume nosuku eminyakeni emi-5, futhi manje nakhu ukumamatheka kwakhe okusha sha, futhi uhlangane nothando lwempilo yakhe ngemuva kokumkhanyisela abelungu bakhe abaphambili. Vele, lokhu kusho ukuthi empeleni usiza abantu abanele ukuthi bathole izifundo zamacala angempela, njengoba Abantu abanobuhlakani bangabona amanga i-90% yesikhathi. Manje ukubuyekezwa kuguqulwa kwaba yindaba ebuyisekayo. USally ubenomhlangano omkhulu wesonto futhi ubedinga amakhukhi angama-500 ngoMsombuluko, futhi ayikho enye indawo yokubhaka izitolo endaweni ebizimisele ukumsiza, aze axhumane nathi "X". Uma nje usiza ikhasimende ngokusemthethweni, futhi kweqe abakulindele bazovumela ukuthi ucwaningo lwakho lwamacala omphakathi inqobo nje uma ubaphatha ngenhlonipho nangokungakhethi. Manje, ibhizinisi elinenani elifanayo "lokubuyekezwa" alikwazi ukuxhuma ezingeni elijulile, lomuntu ngoba kumane kuyinkampani yezomthetho yezinkanyezi ezi-5, kanti wena usize uJoe ukuthola imali yokusiza ukukhokhela izindleko zakhe zokwelashwa ezikhuphukayo.
Okuqukethwe okwenziwe ngezifiso: Buka i-KnowledgeBase Helpdesk yethu iphelelwe yisikhathi
Ezweni lapho iningi labantu ligxile kuphela ekungasetshenzisweni, abantu abane-jaded, ngaphandle kwephutha leziqinisekiso zabo zokufuna ukwazi ukuthi ungumnikazi webhizinisi onakekela ukuxazulula inkinga yabo ngobuqotho, hhayi ukukhanyisa izikhwama zabo kuphela.
Ukuphendula uxhaxha lwezincingo zocingo ukuze nje uvale ukukhungatheka kukhombisa umzamo wokwehlisa isithunzi inqubo yokuthengisa nolwazi lomsebenzi wamakhasimende. Yizinkampani ezithatha isinqumo sokuya ngakolunye uhlangothi, i-hyperpersonal, ethola ukwethenjwa nebhizinisi lomthengi wanamuhla ofundile nonamandla.
Lokhu kuholela kwelinye lamakhasimende kaDan Anton abhekene nezinhlelo zokukhangisa ezidijithali, I-Atlanta SEO, lapho iklayenti ngalinye lithola ukubonisana ngezifiso kwevidiyo, 1 kuya ku-1. Ividiyo eyimfihlo, eyenzelwe umuntu oyedwa kuphela. Le ngxenye "yokuqukethwe" ithatha amahora afinyelela kwangu-2 ukuyakha, futhi imahhala ngokuphelele. Umqondo wokukhombisa umnikazi webhizinisi yonke into ngaphambili ngaphandle kwenkokhelo noma inkontileka iyethusa ama-ejensi amaningi okukhangisa, njengoba “imfihlo” ivezwa futhi ngeke besakudinga, okuholela ekulahlekelweni kwebhizinisi, nasekuchithekeni kwesikhathi.
Iqiniso lifakazele okuphambene nalokho. Ukubuyiselwa umgomo uyakhombisa uma ukhombisa ngokusobala nangokungahlosiwe, hhayi nje ukusho, ukuthi ungayithuthukisa kanjani impilo yamathemba ezingeni lomuntu ngamunye, izinga lokuguqulwa nokusetshenziswa kokuqukethwe kuyakhuphuka. Isithombe esingezansi siyisifinyezo sesikhathi esichithwe ukubuka izeluleko ezimbalwa, kanye nevidiyo eyodwa ejwayelekile. Qaphela ukubukwa kwesikhathi okumaphakathi kukhulu kakhulu kunezinga lomkhakha Amaminithi we-4 namasekhondi angu-12.
Ukuhlanganiswa kokubonisana komuntu siqu, ubufakazi bezenhlalo ngezifundo ezimele, kanye nomqondo wohlelo lokumaketha / isabelomali kuholele ezingeni eliphakeme lokuguqulwa, futhi okungenani ukwanda okungu-150% kokusetshenziswa kokuqukethwe uma kuqhathaniswa nesikhathi somkhakha esimaphakathi sokubuka isikhathi.
Ubuntu njengokuqukethwe: Abantu benza Ibhizinisi nabantu
Iningi labaninimabhizinisi bayesaba ukubeka ubuso babo noma ukusho inani lesiphakamiso sabo, ukuthi kungani befuna ukuthola ibhizinisi lesithembiso. Abakwenzayo bavuzwa, njengoba kufakazelwa ukuguqulwa komthofu kukhuphuka ngama-500% ngokungeza ividiyo yokuphuma kuwebhusayithi ye-ejensi yokuthengisa yedijithali ye-Atlanta SEO, kusuka ku-1 kuhola usuku kuye ku-5, ngezinga elifanayo nekhwalithi yethrafikhi. Ukuxhuma, ngisho nasezingeni eliphezulu, kukunikeza ithuba lokuthi ekugcineni bathole ukwethenjwa kwabo nebhizinisi ngezenzo, hhayi izithembiso ezingenalutho. Ividiyo efanayo yangaphambi kwevidiyo, ukuxhumana kwangaphambili kwabantu, ibiphuma kule nhlangano ngaphandle kokwenza noma yini, ngenxa yokwesaba, ukungaqiniseki, noma ukunganaki. Okokugcina, okuqukethwe kudinga ukusetshenziselwa ukubizelwa esenzweni.
Amathiphu ama-5 wokunyusa ithrafikhi kuwebhusayithi yakho ye-Bakery iyindlela endala yokwenza ukukhangiswa kokuqukethwe. Okuthunyelwe kwama-blog ejwayelekile kushintshwe ukubuyekezwa, ukuxoxwa kwezindaba (ama-case studies), amanxusa omkhiqizo (abaxhumana nabo), abezindaba, ukwenza okomuntu siqu (ukubonisana), nobuntu (okusho isiphakamiso sakho senani njengokungathi umngane othembekile noma ilungu lomndeni). Yile ndlela uDan Anton akhule ngayo esuka enkampanini yesoftware yomuntu oyedwa waqasha inqwaba yochwepheshe abaphezulu emhlabeni wonke futhi wasiza izinkulungwane zamakhasimende, ethola izibalo ezingaphezu kwe-7 minyaka yonke. Uma ukholelwa kulokho okwenzayo, okuqukethwe kuyimoto yakho yokukuhlukanisa nomhlambi wezikhathi ezithile.
Tags: Oxhumana naboAmazonandy greenhawI-BacklinksIndexerOkuhleizinga lokunciphisaamanxusa omkhiqizoclickbankubufakazi beklayentiucwaningo.mectrOkuhlangenwe nakho Kwekhasimendeubufakazi bamakhasimendeGoogle +insidesalesboxJVzooOg Mandinoamaphuzu abuhlunguamaphuzu ebuhlungu besikhathi esizayoisilinganiso se-serp bounceserp chofoza ngokusebenzisa isilinganisoiserp ctrisikhathi sokuhlala se-serpizinyoniUkuxoxa ngezindabaukuzibandakanya komsebenzisiI-WarriorForum
Douglas Karr Thursday, June 9, 2016 Friday, June 10, 2016
Ukumaketha kwakho okuphumayo akusebenzi kangako ngaphandle kwemizamo engenayo
Ungakuthuthukisa Kanjani Ukuzibandakanya Engqungqutheleni Yakho Elandelayo